ရုပ်မြင်သံကြား လိုင်းများနှင့် ရေဒီယိုလိုင်းများမှ တေးသီချင်းများကို ထုတ်လွှင့် သုံးစွဲရာ? - Yangon Media Group
ရုပ်မြင်သံကြား လိုင်းများနှင့် ရေဒီယိုလိုင်းများမှ တေးသီချင်းများကို ထုတ်လွှင့် သုံးစွဲရာ?
ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများနှင့် ရေဒီယိုလိုင်းများမှတေးသီချင်းများကို ထုတ်လွှင့်သုံးစွဲရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သူများအသင်း (MBA)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးတို့မှ တာဝန်ရှိသူများမှညှိနှိုင်းဆွေး နွေးပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ၌ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာအသံနှင့် ရုပ် မြင်သံကြားအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သူများ (MBA) အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကို(ကိုကို-စက်မှုတက္ကသိုလ်)၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ဌေး၊ အထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်သက် မောင်၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၁)ဦးသန်းထွေးဇော်၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၂)ဦးကြည်ထွန်း၊ ဘဏ္ဍရေးမှူး ဦးရဲနိုင်စိုး၊ စာရင်း စစ်ဦးမြင့်ဇော်၊ BOD အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဒေါ်ခင်သော်တာထွန်း၊ ဦးမင်းမင်း၊ဦးဇင်မျိုးသူ၊ ဦးကျော်ဆန်းတို့က တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံးမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးလေး၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၃) ဦးစိုးမိုး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ထူးအောင်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှူး ဦးမိုးဆွေတို့တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သူများ (MBA) အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကို(ကိုကို-စက်မှုတက္ကသိုလ်)က ”ဒီအဖွဲ့ကတော့ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့မှာ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် တွေကတော့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေ ရေဒီယိုလိုင်းတွေက အနုပညာ ရှင်တွေရဲ့ သီချင်းတွေကို သုံးစွဲတဲ့ အခါမှာဂီတဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်တွေ သီချင်းသုံးစွဲမှုတွေဒါတွေကို ကျွန် တော်တို့က ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဆွေးနွေးတဲ့ သူတွေထဲမှာဆိုရင် ရုပ်မြင်သံကြားက တာဝန်ရှိသူတွေ ရေဒီယိုလိုင်းတွေက တာဝန်ရှိသူ တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေရယ် ပါဝင် ဆွေးနွေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဓိကဆွေးနွေး ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ ရုပ်သံလိုင်းတွေ ရေဒီယိုလိုင်းတွေက သီချင်းတွေကိုမူပိုင်ခွင့်နဲ့အညီ ဘယ်လို သုံးစွဲကြမလဲနောက်လက်ရှိမှာ မူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ကိုဘယ်လိုပြေလည်အောင် ဖြေ ရှင်းကြမလဲ။ ဆိုတာတွေကိုပထမ ဆုံးအစည်းအဝေးအနေနဲ့ ဆွေးနွေး တာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ရုပ်မြင် သံကြားလိုင်းများနှင့် ရေဒီယိုလိုင်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးနှင့် အနုပညာရှင်များ၏တေးသီချင်းများ သုံးစွဲရာတွင်မူ ပိုင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များအတွက် နှစ်စဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနေသည့်များကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချက်များအား စာချုပ်တွင်ထည့်သွင်း ရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါစာချုပ်အားလည်း ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မတ်လအကုန်တွင်ချုပ်ဆိုရန် သဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။